Barlamaanka Somalia oo Mar kale ka Arinsaya Darbiga Kenya – Radio Daljir
Barlamaanka Somalia oo Mar kale ka Arinsaya Darbiga Kenya
Nofeembar 28, 2015 1:43 b 0
Somalia, November 28, 2015-(Daljir)_Mudanayaasha barlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay yeelan doonaan kulan aan caadi ahayn oo ay uga hadlayaan arrimaha ammaanka xuduudka Soomaaliya iyo Kenya iyo derbiga ay Kenya kadhisayso xuduudka labada dal.
Xildhibaan Maxamed Cumar oo katirsan barlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in barlamaanka looqaybin doono sharciga derbiga ay doonayso inay dhisto dowladda Kenya oo ay soo diyaariyeen gudiga arrimaha dibadda ee barlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaanka ayaa sheegay in ugu horayn mudanayaashu ay akhrin doonaan sharcigaasi oo uu sheegay inuu muhiim u yahay, dalka kadibna ay dood kulul ka yeelan doonaan derbigaasi oo ay Kenya dhowaan sheegtay inay xuduudka Soomaaliya kadhisi doonto.
Dhowaan ayey ahayd markii raâ€™iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaâ€™arke uu sheegay in dowladda Kenya kala hadleen arrimaha xuduudka labada dal sidoo kalena aysan wax derbi ah kadhisi doonin xuduudka labada wadan.
RW Cumar oo Garowe Dhex-Dhexaadin u yimid